Maalinta: Abriil 27, 2018
RayHaber 27.04.2018 Warbixinta Shirka
Kordhinta Dhismaha Jidadka tareenka ee loo yaqaan 'YHT Eskişehir Station Station Work Work' waxaa lagu samayn doonaa Dayactirka Buundada waxaa lagu samayn doonaa Van Gar 6 iyo 7 inta u dhaxaysa Wadooyinka Adeegga Shubka Mawjadaha la Wareegayo (TÜDEMSAŞ)
Dhibaatooyinka gaadiidka ee İzmir
Gamze Geçer oo ka socda Haberekspres ayaa kala hadlay naqshadeeyaha Hasan Topal dhibaatooyinka guud ee dhismaha ee İzmir. Topal wuxuu ku doodayaa in wadahadalada looga wada doodi doono qaab dhismeedka qorshaha magaalada gudaheeda marka laga hadlayo daacadnimada qorshaha. [More ...]
Waxaa abaabulay Ururka Waxsoosaarka Joogtada ah iyo Adeegsiga (SÜT-D) Shirka "Kaarboonta Kaarboon ee Istanbul" 26 Abril 2018 waxaa lagu qabtay Xarunta Dhaqanka ee Istanbul Süleyman Demirel Cultural Center. Soosaarayaasha Adeegga Gaadiidka iyo Saadka ee Caalamiga ah [More ...]
Sharaxaadda Khadka Saxda ee T4 ee ka socda Istanbuul
Qoraal lagu soo dhigay barta Twitter-ka ee Metro Istanbul, duulimaadyada ayaa u dhexeeya M. Selam-Şehitlik sababtuna tahay cilad farsamo oo ka dhacday gobolka Edirnekapı ee khadkayaga T4. Ma jiraan duulimaadyo u dhexeeya Martyrdom iyo Topkapi. Gawaarida IETT ee gobolka loo diro [More ...]
Kooxda Shaqada Jaamacadeed-Jaamacadeed-Warshadaha Xiriirka 10. Kulanka Isku-duwidda wuxuu ku bilowday Esogü
Kooxda Wada Shaqeynta ee Jaamacada-Warshadaha 3-Maalmood ah (KUSI) ayaa waxaa soo qaban qaabisay Wasaaradda Sayniska, Warshadaha iyo Teknolojiyadda, Eskişehir Governorship, Agaasinka Guud ee Sayniska, Warshadaha iyo Teknolojiyadda iyo Jaamacadda Eskişehir Osmangazi. Shirka Isuduwidda, Golaha [More ...]
Khadka Meelaha Meelaha ee Esenyurt Extended
Muhiimadeena ayaa ah meelaha aan ka helno codadka ugu badan ee tareenka dhulka hoostiisa ah Mev Mevlüt Uysal, Duqa Magaalada Istanbul ee Magaaladda Metropolitan, wuxuu go’aansaday in la dheereeyo khadka Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ee hadda socda. Laga bilaabo Esenkent ilaa Esenyurt Square 2.7 [More ...]
Meesha cusub ee garoonka diyaaradaha ee Atatürk Airport, 3. Howlaha loo rarayo garoonka diyaaradaha ayaa si rasmi ah loogu shaaciyay adduunka iyadoo la raacayo warqad loogu magacdaray "NOAM". Gegada diyaaradaha ee Atatürk, 29 Waxaa barbar socda furitaanka garoonka cusub ee Istanbul bishii Oktoobar, [More ...]
Gaadiidka Kozan waxaa lagu nasteexo 8 Cadaadiska Khadka Akhlaaqda
Waxaa la soo dhowaaday dhamaadka Mashruuca Iskuxirka Kozan, oo ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaaladda Adana si loo fududeeyo gaadiidka iyo dadka lugeynaya ee ku yaal bartamaha degmada Kozan. Tufan Pasha, Karacaoğlan iyo xaafadaha Türkeli, halkaas oo ah gobolka cusub ee Kozan [More ...]
Shaqooyinka Gaziantep Yeşilvadi Waxyaabaha Lama Yeelan Karo
Shaqooyinka dhismaha ee Yeşilvadi Boulevard iyo 10 Junction of Junction ee Gaziantep Metropolitan Dowlada hoose ayaa kusii soconaya xawaare buuxda ayadoon hoos u dhicin. Güneş, Geylani, Akkent, Bülbülzade iyo Ertuğrul Gazi [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri waxay sii wadaysaa maalgashiyadeeda nolol magaalo raaxo leh iyo gaadiid aan kala go 'lahayn. Mustafa Kemal Pasha Boulevard, Kocasinan Boulevard iyo General Hulusi Akar Boulevard oo ku sugan isgoyska iyo buundada [More ...]
Daraasadihii ugu dambeeyay ee dhinaca saadka iyo silsiladda sahayda iyo horumarintii ugu dambeysay ee qaybta waxaa soo qabanqaabiyay Jaamacadda Uludağ ee Kuliyadda Injineerinka ee Warshadaha Warshadaha iyo Saadka. Saadka iyo saadka sahayda Qaranka [More ...]
7, kaas oo lagu xaqiijiyey Bursa Metropolitan Municipal iyadoo ujeedka 'Mustaqbalka Teknolojiyada'. Farxad weyn oo ka socota Bandhigga Cilmiga Sayniska ee Diyaaradda Turkish Airlines ayaa bilaabay. Waxay leedahay kala soocin ee isagoo ugu weyn ee aagga of Turkey ee Science Expo, Sunday, April taariikhda 29 [More ...]
Ankara La Xiriira Gawaarida Korjoogteynta Xarunta Shaqaalaha Adeegga Bulshada
25, oo ah xarun bulsheed oo loogu adeego shaqaalaha Ankara Locomotive Maarana Seminaar, ayaa shaqeyneysey ilaa bishii Abriil 2018. Türk-İş Madaxweynaha Ergun Atalay iyo Maareeyaha Guud ee Gaadiidka TCDD Veysi [More ...]